फर्कने पुल भत्किसकेको कुराले विदेशीएका नेपाली घर फर्कदै : प्रचण्ड
प्रिय परिवर्तन मिठो सम्झना । अहिले हामीलाई यो विदेशी भूमिमा तिम्रो झझल्को आउन थालेको छ । यदि हामी हाम्रै धर्तीमा आफ्नै जन्मभूमिमा भएको बेला तिमी जन्मेको भए सायद नै यो
सुर्य खवास, युएई, २०७४ पुस ७ प्रवासी भुजेल समाज सेवा समिती युएईले नेपाल आदिवासि जनजाती महासंघ युएई का संरक्षक एवं निवर्तमान अध्यक्ष डेरराज गुरुङको प्रमुख आतिथ्यमा भुजेलहरुको आफ्नो मौलिक पर्व “भुजेली
प्रवासबाट बाम एकताको सन्देश
परिवर्तन खबर युएई, नेकपा एमाले को प्रवास संगठन प्रवासि नेपाली मञ्च युएई र माओवादी केन्द्रको जनप्रगतिशिल मञ्च युएई बिच बाम एकतालाई स्वागत र समर्थन गर्दै संयुक्त प्रेश विज्ञप्ति जारी गरेका
युएईमा प्रवासीको देउसी भैलो
काठमाडौँ : नेकपा एमालेको प्रवास संगठन प्रवासी नेपाली मञ्चले युएईका विभिन्न क्षेत्रमा देउसी भैलो खेलेर तिहार मनाएका छन । नेपाली हरुको सांस्कृतिक पर्वमा आपसी भाइचारा बढाउदै परम्परालाई निरंतरता दिने उद्देश्यले
परिवर्तन खबर, काठमाडौँ । काठमाडौँ : म एनआरएनए विश्व सम्मेलनको अन्तिम दिन सम्मेलन कक्षमा छिर्दै थिएँ । दुई जना सहभागीको गफ मेरो कानमा पर्यो । दुवै सहभागी बेल्जियमबाट आएका रहेछन् ।
एनआरएनएको अध्यक्षमा भवन भट्ट भारी मतान्तरले विजयी !
परिवर्तन खबर, काठमाडौँ गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको ८ औ विश्व सम्मेलनले भवन भट्ट (११९७)को समुहलाई सानदार बिजयी बनाएको छ । साथै खर्बपतिको सुचिमा रहेकी जमुना गुरुङ (५८४) लाई
परिवर्तन खबर, काठमाडौँ काठमाडौं–गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को चुनाव निकै रोचक देखिएको छ । उम्मेदवारी घोषणा गरेकाहरुले आफ्नो प्रचारलाई तीब्र बनाएका छन् । एनआरएनएको उपाध्यक्षका उम्मेदवर खगेन्द्र क्षेत्रीको प्रचारमा महानायक
परिवर्तन खबर, काठमाडौँ , असोज २८ । ‘कुनै पनि काम सानो हुँदैन । सानो भनेर कामलाई हेलाँ नगरौँ । सानो काम ध्यान दिएर गर्नुभयो भने त्यसले आफुले गर्नसक्ने कामप्रति विश्वास
देशको विकास र समृद्धिमा नेता र नेतृत्व दुवै महत्वपूर्ण
परिवर्तन खबर, काठमाडौँ । काठमाडौँ, असोज २६ । नेकपा एमाले विदेश मामिला विभागद्वारा आज बिहान देशको विकास र समृद्धिमा गैह्र आवासीय नेपालीहरुको भूमिका विषयक एक अन्तक्र्रिया कार्यक्रम आयोजना गरियो । सो
प्रवासमा दशैं : फोटो फिचर
परिवर्तन खबर, काठमाडौँ आश्विन शुक्ल दशमीका दिनमा मनाइने विजयादशमी पर्व नेपाल लगायत विश्वभर मान्यजनबाट दुर्गा भवानीको प्रसादस्वरूप टीका, जमरा थापी मनाइएको छ । विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरुले पनि आ-आफ्नै ठाउँमा
मान्छेले स्वर्ग भन्ने गरेको के यही हो अमेरिका !
परिवर्तन खबर, काठमाडौँ, काठमाडौँ : यहाँ वासिंगटनमा बसेको छ, कमाएको र खाएको छ अनि नेपालको बारेमा नचाहिंदो कचरपचर गरेको छ। जे गरेका छन् नेपालीले नेपालमा, त्यसको फल उनीहरुले बेहोरिरहेका छन्।